Sheeko gaaban - Onward Endeavors
Inyar buu uruursaday waxaanuu go’aansaday inuu ganacsi bilaabo, wuxuu is waydiiyey ganacsigii uu bilaabi lahaa, indho indhayn kooban kadib wuxuu ku qancay inuu hudheel furto, walow wax khibrada aanu u lahayn, sababtoo ah waxa lagu yidhi hebal baa ka faa’iday, dhawr jeer oo uu hudheelo wax ka cunayna wuxuu arkay hudheeladaas oo camiran.
Suuqa ayuu galay goobtii kiraysay, qalabkii soo iibi, shaqaalahiina inaadeeradii wada qor, halkaa markay marayso isagoon wali furin intii yarayd ee uu uruursaday ayaa ka dhamaatay xitaa adeegii u horeeyay way u gaadhi wayday wakaa qaylo dhaan tagay ee waxoogaa soo amaahday habeenkii ugu horeeyay wuxuu casumay intii ehel, qaraabo, iyo asxaab uu lahaa casuumaduna isagay ku qornayd habeenkaas.
Maalintii labaad ayuu quraacdii diyaariyey cidba way u soo gali wayday, qadadii sidoo kale cidba way soo gali wayday, alaylahee habeenkii ayaa 10 qof wax ka cuneen, hase ahaatee dakhligii habeenkaa soo galay iyo kharashaadkii uu maalintaa galay marka la isku eego aadbay u kala badnaayeen wakaa markale amaah doontay, waxoogaa kadib wuxuu dareemay in quraacda iyo qadodaba aan laga iibsan ee cashada uun laga iibsado wuxuuna go’aansaday inuu labadaaba joojiyo si kharashka uu u yareeyo.
Isagoo sidii ula daalaa dhacaya iska daa inuu faa’ido ka helee isagii amaah ku jiro ayaa mid kale hudheel kale ka ag furay. Wadnahaaba istaagi gaadhay…
Inyar kadib ninkii isaga ahaa wuu xaraashay alaabtii meheradiina albaabada ayuu u laabay.
Imisa qalad ayuu sameeyey aragtidaada?
Hadii ganacsigaagu xaaladan oo kale ku jiro ama aad doonaysaba inaanay tanoo kale kugu dhicin nala soo xidhiidh inshallah.